Tebụl jụrụ oyi - Delta Engineering Belgium
Banye na otu "Tebụl jụrụ oyi"
Tọzdee, 29 Machị 2018 by Cristina Maria Sunea
Ugboro na nchekwa tebụl - maka ọrụ abụọ kwadoro
The jụrụ na echekwa table solves jụrụ & echekwa nsogbu na igbu ịkpụzi. Na-ezere nkwụsị nkwụsị na ịmepụta igwe / ndị na-ede ihe & na-ezere egosipụta. Nchekwa ebu ebu: 1200 mm obosara, 4000 mm ogologo. Enwekwu arụmọrụ nke nkwakọ ngwaahịa gị.
bipụtara Tebụl jụrụ oyi
Akpadoro n'okpuru: kwụsịrị ahịrị, akara dị mma, igbochi, mma, na-egosipụta na aha mmado
The jụrụ na echekwa table solves jụrụ & echekwa nsogbu na igbu ịkpụzi. Na-ezere nkwụsị nkwụsị na ịmepụta igwe / ndị na-ede ihe & na-ezere egosipụta. Nchekwa ebu ebu: 1400 mm obosara, 4000 mm ogologo. Enwekwu arụmọrụ nke nkwakọ ngwaahịa gị.
▼Tebụl jụrụ oyi